नाटक जिउँदो आकाश ललितपुरमा मञ्चन हुने – Sagarmatha Online News Portal
नाटक जिउँदो आकाश ललितपुरमा मञ्चन हुने
कृष्ण जित राई
ललितपुरको नखिपोटको नयाँ नाटकघरमा नाटक जिउँदो आकाश मञ्चन हुने भएको छ ।
साइलेन्ट एक्टको प्रस्तुति तथा टुगेदर वी क्यान (हामी) को आयोजना र बेरी जोन एक्टिङ स्टुडियोको सहकार्यमा सो नाटक मञ्चन गर्न लागिएको हो ।
ललितपुरको विशाल चोक अवस्थित बेरी जोन नवनिर्मित नाटकघरमा जिउँदो आकाश नाटक यही साउन २६ गते शनिबारदेखि २९ गतेसम्म मञ्चन गरिने यसका संयोजक नारायण थापा मगर र नेचुरल्ली दीपकले जानकारी दिएका छन् ।यौनिक तथा अल्प सङ्ख्यक (तेस्रो लिङ्गी)को विषय समेटिएको जिउँदो आकाश नाटक चन्द्रप्रसाद पाण्डेयको लेखेका हुन भने,आर.के. मेहता रोशनको परिकल्पना तथा निर्देशन रहेको यो नाटकमा अलि सुब्बाको एकल अभिनय छ । करिब १ घन्टा १० मिनेट समयावधिको नाटकमा सुब्बाले करिब एक दर्जन चरित्रको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
‘प्रकृति भन्ने कुरा बाहिर परिवर्तन गरेर मात्र कहाँ हुन्छ र ! सुन्तला रोपेको ठाउँमा कागती नफले जस्तो हो प्रकृति । लत छुटाउन सकिन्छ तर प्रकृति छुटाउन सकिन्न । प्रकृतिले हामीलाई यस्तो जीवन उपहार दियो । यसलाई सहस्र ग्रहण गर्नु हाम्रो कर्तव्य बनेको छ ।’ भन्ने मूल आशयको यो नाटकले नेपाली रङ्गमञ्चीय परम्परामा नयाँ आयम थप्न सफल भएको छ । एक वर्षको दौरानमा करिब ८० पटक मञ्चन भएको यो नाटक सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक छोटो समयावधिमा धेरै स्थानमा मञ्चन भएको नाटक हो ।
काठमाडौ जिल्लामा विभिन्न नाटकघरहरुमा नाटकको चहलपहल भए पनि यति नजिकैको जिल्ला ललितपुरमा रङ्गमञ्चीय गतिविधि एकदम कम भएकोमा चर्चित नाटक जिउँदो आकाशले नाटकका पारखीलाई स्वाद दिने जमर्को गरेकोे छ । नाटक मञ्चन कार्यक्रमका संयोजक नारायण थापा मगरले बताए । यसै नाटकमार्फत बेरी जोन नाटकघरलाई नियमित नाटक मञ्चनको सिलसिला अगाडि बढाउने योजना रहेको बेरी जोन एक्टिङ स्टुडियोका निर्देशक मुस्कान राईले बताए ।
यो नाटक नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नाट्य महोत्सवमा पहिलो पटक २०७३ जेठ २९ गते चरीकोटको सिमपानी हलमा मञ्चन भएको हो । त्यसपछि काठमाडौमा २०७४ साउन १३ देखि २१ सम्म पहिलो चरण र फागुन ११ देखि २० गतेसम्म दोस्रो चरण गरी प्रदर्शन गरियो । साथै नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै भारतको आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक फेस्टिभलमा सहभागी हुँदै फागुन २८ गते गुहाटी र ३० गते दिल्लीमा अत्यन्त सफलताका साथ यो नाटक देखाइएको थियो । २०७५ सालको नयाँ वर्षको सुरुवातासँगै पोखरा थिएटरको गन्धर्व नाटकघरमा समेत मञ्चन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समलिङ्गी, दुईलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी तथा अन्तरलिङ्गीको घृणाविरुद्धको दिवस (मे १७ तारिक) को सङ्घारमा वैशाख ३१, जेठ १ र २ गते तीन दिन यो नाटक मन्त्री, संसद, सुरक्षा बलका उच्च पदाधिकारी तथा आम दर्शकमाझ यो नाटक देखाइएको थियो । यसका साथै झापा जिल्लाको दमक र बिर्तामोड बजारमा २०७५ जेठ ११ देखि २४ गतेसम्म यो नाटक देखाइएको हो ।
ललितपुर जिल्लामा नाटकको चहलपहल त्यति राम्रोसँग नभएकाले यो नाटकको प्रदर्शनले पक्कै पनि नाटकप्रेमीहरुको नाटक हेर्ने माहौलको सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको निर्देशक आर.के मेहताले बताए ।